Ukraine International Airlines inobatsira mhuri dzePS752 vakaurayiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ukraine International Airlines inobatsira mhuri dzePS752 vakaurayiwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ukraine International Airlines inopa rubatsiro kumhuri dzePS752 vakaurayiwa
Ukraine International Airlines inoenderera ichipa mhuri dze PS752 vafambi nevashandi vane ruzivo, rwepamutemo, uye rwekutsigira pamoyo muHofisi Huru yekambani muKyiv pamwe neFamily Assistance Center kunze kwenyika.
Hatigone kupora pamusoro pekutambudzika kwendege yendege yeUIA yakatora hupenyu hwevanhu 176 vafambi nevashandi musi waNdira 8, 2020, mudenga reIran. Ukraine International inonzwira mhuri yega yega uye munhu wese akabatwa. Pave neinenge mwedzi kubva tsaona yePS752 muTehran. Nekudaro, kuchema kwechikwata cheUIA, mhuri, uye shamwari dzemufi hakusi kudzikira.
“Mifungo yedu nemoyo yedu zviri nevatakuri nevashandi vePS752. Uku kurasikirwa kunorwadza kucharamba kuri mavanga kuUkraine International, ”- akadaro Yevhenii Dykhne, CEO weUIA, akamirira timu yese.
Kuva nehukama nehama dzepedyo dzevatakurwi vePS752 nevashandi, kutanga pazuva rekutanga kuUkraine Nyika yose yakatanga kupa ruzivo, zvemutemo, uye nerutsigiro rwemweya kuburikidza neHofisi hofisi uye vamiriri vekambani. Hotline muUkraine (nyika dzese), Canada, neIran - nyika dzakarasikirwa nevagari vazhinji - dzinoramba dzichishanda kutenderera nguva.
Ukraine International Airlines inochengetedza kugara ichitaurirana nevakuru veIran uye Embassy yeUkraine muIslamic Republic yeIran maererano nemikwende iri pasi pesimba remitumbi yeIran. Iyo yendege inoita nepainogona napo kuti zvinhu zvemunhu mumwe zvevapfuuri vePS752 nevashandi vadzosere kumhuri dzavo.
“Tinoziva zvizere kuti rutsigiro rwemari rwakakodzera nguva rwakakosha kumhuri dzevafambi nevashandi. Tinotenda kuzvipira uye kushanda nesimba kwemagweta epasi rese, makambani einishuwarenzi uye reinsurance izvo zvavanoita kuitira kuti vaite nzira dzakatarwa dzekuwana marezinesi muUS uye kutanga nekubhadharisa pasi pemamiriro ehurumende yezvirango. Kunzwisisa uye mupiro wezviremera zvakasiyana zvedunhu rese maererano nemitemo yekudzorera zvese zvakakosha uye zvakakosha. Panyaya iyi, tinotarisira kuti zvese zviitwe zvichapedziswa munguva pfupi iri kutevera, ”akadaro Yevhenii Dykhne.
Ndege inotaura kuonga kuHurumende dzeUkraine neCanada nekupa nyanzvi kuti dziongorore dambudziko riri panzvimbo iyi. Ukraine International Airlines inodaidza Hurumende dzeUkraine, Canada, UK, Sweden, neAfghanistan pachimiro chakasimba chenyika dzese icho chingaita kuti kuferefete kwakadzama uye kujekeserwe pachikonzero chekupunzika kwendege yeUIA, kubatsira kutsanangudza mutoro uye muripo.
“Hatisi kukwanisa kudzosera nguva kumashure. Zvisinei, munguva dzino dzakaoma, tinoedza nepatinogona napo kupa rutsigiro rwakanyanya kumhuri dzevapfuuri nevashandi vePS752 ”, - akapfupikisa Yevhenii Dykhne.